Vacos Cam IR, igwefoto onyunyo nwere nnwere onwe | Androidsis
Vacos Cam IR, igwefoto onyunyo nwere nnwere onwe
Taa, anyị na -agwa gị okwu ọzọ igwefoto onyunyo ụlọ ma ọ bụ azụmahịa. A nnukwu ihe ọzọ na ụlọ ọrụ nchekwa ọhụrụ na -enye ọrụ dabere na ntinye kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe sistemụ nchekwa nke gị Enweghị mkpa ịdabere na ụlọ ọrụ mpụga, Vacos Cam IR bụ nhọrọ ịtụle.
Anyị na -ahụ ọtụtụ ohere mgbe anyị ga -achọ igwefoto onyunyo. Ọ na -esikwa ike mgbe ụfọdụ ikpebi otu nhọrọ ma ọ bụ ọzọ. Taa, anyị na -agwa gị nke ọma ihe niile Vacos Cam IR nwere ike ịnye anyị. Kedukwa ihe kpatara o ji dị iche na ụdị ndị ọzọ n'ahịa.
1 Vacos Cam IR, igwefoto onyunyo nwere nnwere onwe
2 Ịkpọghe igbe Vacos Cam IR
3 Nke a bụ Vacos Cam IR
4 Atụmatụ Vacos Cam IR
5 Nkọwapụta Nka na ụzụ
Oge ọ bụla anyị nwere ohere ịnwale igwefoto onyunyo maka ụbọchị ole na ole, anyị ekwuola otu ihe ahụ. Mgbe a bịara ide uru na ọghọm, na ngalaba gbasara ihe kacha amasị anyị, anyị na -ekwukarị gbasara batrị. Ka ọ dị ugbu a igwefoto onyunyo mbụ nke anyị nwegoro ike igosipụta na o nwere nnwere onwe nke ya ọ dịghị mkpa nkwụnye. Nkọwa nke ahụ na -eme ka ọ pụta ìhè n'etiti nhọrọ a na -apụghị ịgụta ọnụ, na nke ahụ ị nwere ike zụta ugbu a ke ukara website.
Na-adabere a batrị na -eme ka igwefoto nnọọ vasatail. Anyị achọghị plọg dị nso, otu n'ime nnukwu nsogbu anyị na -ahụ mgbe anyị chọrọ itinye igwefoto n'ụlọ anyị. Dịka iwu n'ozuzu, otu akụkụ anyị chọrọ ijikwa bụ ọnụ ụzọ mbata, yana idobe igwefoto na mpụga na -enweghị ọkụ eletrik gụnyere nrụnye ọnụ na ọbụna obere ọrụ. Ụfọdụ ihe anyị nwere ike chefuo na Vacos Cam IR.
Anyị nwere ike ịhapụ nkwado etinyere na akụkụ na -amasị anyị yana na -ewepụ igwefoto ngwa ngwa mgbe anyị kwesịrị ịgba ụgwọ batrị ya. Obi abụọ adịghị ya, mgbakwunye na -eme ya pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ndị ọzọ, wee tụgharịa Vacos Cam IR ka ọ bụrụ sistemụ onyunyo “wearable” nke ahụ anyị nwere ike ịchọta ọrụ n'oge ọ bụla, na -akwụsị ịbụ ihe onyunyo echekwara.
Ịkpọghe igbe Vacos Cam IR
Dị ka oge niile, anyị na -eleba anya n'ime igbe ngwa dị n'ọrụ, iji gwa gị ihe niile na ngwa anyị hụrụ n'ime. N'okwu a, ntakịrị karịa ka anyị tụrụ anya ya. Nwere igwefoto n'onwe ya nke ịmụrụ anya, nke na -adị ka ibu "dị mkpa" ihe na -eme ka ọ yie ihe adịghị mma. Anyị nwekwara ngwa a na -atụgharị na mgbidi na -adịgide adịgide, na kposara kwekọrọ.
Na mgbakwunye, anyị na -ahụ eriri maka chaja batrị nke Vacos Cam IR, na nke a n'ụdị Micro USB. Ọzọkwa obere dowels ikpuchi kposara nke nkwado a kapịrị ọnụ. A Ngwa oval magnetized nke anyị nwere ike kwado igwefoto n'ụzọ kwụsiri ike na tebụl ma ọ bụ mgbe ị na -ana batrị. N'ikpeazụ, na mgbakwunye na ntuziaka na akwụkwọ ikike, a Ndekọ 'oge' elekere 24.
Nke a bụ Vacos Cam IR
Na-ele anya nhazi nke Vacos Cam IR, anyị na -ahụ ka o nwere ụfọdụ ahịrị ndị dị ugbu a na nke ọgbara ọhụrụ mara mma n'ezie. Ihe a họọrọ maka owuwu ya, yana achacha achacha achachae mee ya ka ọ nwee mma ngwaahịa oyiyi. Dị ka onye nrụpụta si kwuo, ọ bụ e mere iji nagide ihu igwe na -adịghị mma ọ ga -eguzogidekwa maka iji ya eme ihe n'èzí.
na n'ihu, n'ụdị square nwere akụkụ gbara okirikiri, anyị na -ahụ oghere na infrared, ịdị nso na ihe mmetụta.
Dezie nke gị ebe a Agụụ Cam IR ke ukara website na nke kacha mma price
Na okpuru bụ nkwuputa ụda, nke igwe okwu na obere taabụ silicone n'azụ nke bụ ọdụ ụgbọ mmirimaka batrị.
Su azụ adabere na oghere nwere oghere ebe etinyere bracket nke mgbidi. Azu na ọ bụ ndọta ka ngwa ngwa okirikiri ahụ wee rapara. Nakwa na a bọtịnụ anụ ahụ maka ịgbanwuo na gbanyụọ nke ga -ejekwara anyị ozi n'oge nrụnye.
Atụmatụ Vacos Cam IR
Ugbu a, anyị na -ele uru Vacos Cam IR nwere ike inye anyị. NA ihe mbụ iji gosi, ihe anyị kwuru maka ya na mbido bụ batrị nke ya nke ọ bara uru. Batrị na -akwụghachi ụgwọ nwere ike 6700 mAh Nke anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ya na ngwa dị n'ụdị oghere anyanwụ, etinyeghị ya dịka ọkọlọtọ. Onye nrụpụta ahụ na -ahụ na anyị nwere ike were otu ụgwọ were were ọnwa, n'agbanyeghị na nke a ga -adabere na oge ọrụ.
La 2.8mm oghere na -edekọ onyogho na ogo 1080p zuru oke ma nwee n’abali infrared dị mma nke na -enweta ogologo ruo mita 10. Ihe ọzọ dị mkpa na Vacos Cam IR bụ na ọ bụkwa nwere ebe nchekwa dị n'ime maka ịdekọ onyonyo. N'otu aka anyị agaghị enwe ike ịgbasa ebe nchekwa ya 16 GB, mana n'aka nke ọzọ anyị nwere ọrụ ndenye aha iji chekwaa onyonyo n'igwe ojii.
Ọ kwesịkwara ịmara na obere igwefoto onyunyo a bụ kwadebere ya na algọridim ọgụgụ isi siri ike. Dabere n'ịgụ ihe onyonyo na ụdị na ọnọdụ okpomọkụ, ọ bụ nwee ike ịiche ndị mmadụ na ihe. Ihe ga -agbada ibelata mkpu mkpu ụgha na ịdọ aka na ntị na -enweghị isi.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ịkwụsị ịza ajụjụ ahụ Vacos IR Cam na ngwanrọ ya dakọtara na ndị enyemaka na -enyere aka sitere na Google na Amazon. Ọ bụrụ na anyị nwere akụrụngwa akpaaka ụlọ, yana Alexa, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike inye igwefoto anyị iwu ka ịgbanwuo, gbanyụọ ma ọ bụ malite ndekọ, n'etiti iwu ndị ọzọ. Na ekele ụda bidirectional na ngwa mkpanaka, anyị nwere ike iji igwefoto soro ndị nọ n'ihu ya na -ekwurịta okwu.
Nlereanya Agụụ Cam IR
Video mkpebi 2MP (1920 x 1080)
Foto ihe mmetụta 1 / 2.9 "Ọganihu CMOS na-aga n'ihu
Lensị 2.8 mm
Anya n'akuku 120º
Ọhụụ abalị IR ruo mita 10
Batrị 6700 mAh
Igwe okwu SI
Ọkà okwu SI
Nguzogide mmiri / uzuzu IP65
Ahịa 84.19 €
Linkzụta njikọ Agụụ Cam IR
O doro anya na batrị nke ya bụ otu n'ime isi ya kacha sie ike
Inwe ebe nchekwa dị n'ime maka ịdekọ onyonyo na -enwetakwa akara
Nkwenye adịghị mma na -enweghị nkwado nkwado
Agbaghara Ngwa Ịkwụ Ụgwọ Ọwụwa anyanwụ
Nkwụsi ike akwadoghị
Agaghị etinye ụgwọ anyanwụ
Agụụ Cam IR
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Vacos Cam IR, igwefoto onyunyo nwere nnwere onwe
The kacha mma uzo ozo ka airplay maka gam akporo
Ugbu a dị na Cubot MAX3 nwere igwefoto 48 MP maka $ 99